05/29/13 ~ Myanmar News Updates
2:42:00 PM Myanmar News Updates No comments
ရင်ဘတ် အောင့်ခြင်း ၏ အကြောင်းရင်းများ
2:27:00 PM Myanmar News Updates No comments
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း (Chest Pain) သည် ရင်ဘတ် အလယ်တည့်တည့်နေရာ တခုတည်း၌ အောင့်ခြင်းကိုသာ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပဲ ရင်ဘတ် တခုလုံးသာမက ရင်ဘတ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တခြား အစိတ်အပိုင်းများအထိ ပြန့်နှံ့ပြီး အောင့်ခြင်း၊ ထိုးခြင်း၊ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းအားလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး
ဆရာဝန်မှ အတိအကျ ရောဂါ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (Diagnosis) ကိုလုပ်ပြီးမှသာ မည်သည့်ရောဂါ အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ကို သတ်မှတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ရင်ဘတ်အောင့်သည့် ဝေဒနာကို မကြာခဏ ခံစားနေရသူ တချို့သည် ရောဂါကိုဆရာဝန်နှင့် ပြပြီး ရောဂါအဖြေမရှာပဲ မိမိကိုယ်မိမိ နှလုံးရောဂါ (သို့) အစာအိမ်ရောဂါ စွဲကပ်နေသည်ဟု ထင်မှတ်နေကြပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှ အကြံပေးသည့် မိမိ သန်ရာ နည်းများဖြင့် ကုသနေကြသည်ကို မကြာခဏ ကြားသိနေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်သည့် ဝေဒနာကို ခံစား နေသူများ အားလုံး အတွက် ဗဟုသုတလို့ငှာ Dr Warwick Carter ရေးသားသည့် Home Doctor ထဲမှ ကောင်းနိုးရာများကို ကောက်နှုတ်၍ ပြုစု တင်ပြ လိုက်ပါသည်။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းသည် အဆုပ် (သို့) နှလုံးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပါက အရေးကြီးသဖြင့် အရေးပေါ်အနေဖြင့် ဆေးရုံအကူအညီကို ချက်ချင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ တခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် အစာပြွန်၊ ရင်အုံအရိုး၊ နံရိုး၊ နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောမကြီး၊ သွေးလွှတ်ကြောငယ်များ၊ သွေးပြန်ကြောနှင့် နာ့ဗ်ကြောများ၊ ကြွက်သား၊ အရိုးနု၊ ရင်သားနှင့် ကျောရိုးဆစ်များ စသည့် အစိတ်အပိုင်းတခုခုတွင် ပြဿနာရှိပါကလည်း ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမတူသည်ကို အခြေခံ၍ အောင့်သည့် အခြေအနေများမှာလည်း စူး၍အောင့်ခြင်း၊ ကိုက်၍အောင့်ခြင်း၊ ပျော့လွန်းမပြင်းလွန်းအောင့်ခြင်းနှင့် ဖြိကပ်၍အောင့်ခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိပြီး ဆက်တိုက် သို့မဟုတ် အကြိမ်ကြိမ်မကြာခဏ အောင့်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အစာစားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းတို့ကြောင့် စအောင့်နိုင်ပြီး အောင့်သည့်အချိန်တွင် အသက်ရှုကြပ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အဖျားဝင်ခြင်း၊ ပါးစပ်ပျက်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာများ တွဲပါလာနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်မှ လိုအပ်သော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ရောဂါခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးမှသာ ရောဂါကို အမျိုးအစားကို မှန်ကန်စွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆရာဝန်သည် ရောဂါကို အတိအကျ သိရှိရန်အတွက် အရိုးကို ကောင်းစွာစစ်ဆေးနိုင်သည့် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ အရိုးနှင့် တချို့ တစ်ရှူးများကိုပါ မြင်တွေ့နိုင်သည့် CT scan, နှလုံးအလုပ်လုပ်ပုံကို ကောင်းစွာမြင်တွေ့နိုင်သည့် ECG ( Electro-Cardiac Graph), အဆုပ်အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်သည့် Lung Function Test, ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ပါးစပ်မှတဆင့် ကင်မရာထည့်၍ ကြည့်သည့် Endoscopy စသည်တို့ ပါဝင်နိုင်သည့် စမ်းသပ်မှုကို တခု (သို့) တခုထက်ပို၍ှ ပြုလုပ်ပြီး သတ်မှတ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ရှာဖွေပြီး ဖြစ်ရသည့်ရောဂါ ဇက်မြစ်ကို အတိအကျသိမှသာ ထိရောက်သည့် ကာကွယ်ကုသမှုကို ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို အဖြစ်များစေသည့် အကြောင်းရင်းများ
ရင်ဘတ်ဒါဏ်ရာ ရရှိသောအခါ ရင်ဘတ်၌အညိုအမဲစွဲ၍ နံရိုးကျိုးခြင်း၊ ကြွက်သား (သို့) အရွတ်များ စုတ်ပြဲခြင်း စသည့် တခုခုကြောင့် ရင်ဘတ် နေရာ အနံ့ပြားကို အောင့်စေပြီး လှုပ်ရှားပါက ပိုဆိုးပါသည်။
ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖြစ်သော ကူးစက်ရောဂါများသည် များသော အားဖြင့် ကြွက်သားများကို ရောင်စေသဖြင့် ရင်ဘတ်နှင့် ကျောကုန်း ဘက်တွင် ရှိသော ကြွက်သား အဆွယ်အပွား များကို ကိုက်ခဲ နာကျင်စေပါသည်။
ကျောရိုးဆစ်၌ အရိုးကြေပြီး နာ့ဗ်ကြောများအား ဖိညှပ်ခံရ၍ ရင်ဘတ်၏ ကျောဘက်၌ သာမကပဲ နာ့ဗ်ကြောများ ပြန့်နံ့သည့် ဘေး တဖက်တချက် နှင့် အရှေ့ဘက် အထိနာကျင်စေနိုင်သည်။ ကိုယ်အနေအထား ပြောင်းပါက ပိုမိုနာကျင်စေပါသည်။
နှလုံးရောဂါသည် ကော်လက်စထရောလ် ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အဆီဖတ်များမှ နှလုံးကြွက်သားအား သွေး ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် သွေးလွှတ်ကြော တခုခုအား ပိတ်ဆို့ စေသောအခါ ဖြစ်စေပါသည်။ နှလုံးသည် ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကို အောက်စီဂျင်နှင့် အာဟာရ ရောက်အောင် တွန်းပို့ပေးနေသော အင်္ဂါဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် နှလုံးကြွက်သားကိုယ်တိုင်မှာပင် အောက်စီဂျင်နှင့် အာဟာရ မရတော့ သောကြောင့် ကျုံ့လိုက် ကြွလိုက် မလုပ်နိုင်တော့သောအခါ သွေးကိုခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးသို့ ရောက်အောင် မတွန်းပို့ ပေးနိုင် တော့ပဲ နှလုံးရော ခန္ဓာကိုယ်ပါ အောက်စီဂျင်ပြတ်လပ်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ နှလုံးကြောင့်ဖြစ်သော ရင်ဘတ် အောင့်ခြင်းသည် လည်ပင်း၊ မေး (သို့) လက်မောင်း ( ဘယ်ဘက်၌ ပိုဖြစ်သည်) စသည့် ရင်ဘတ်နှင့် ဆက်စပ် နေသည့် မည်သည့် နေရာတွင်မဆို ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ပုံမှန် အားဖြင့် ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်၊ အရှေ့ ဘက် လည်ပင်း အောက်၊ ရင်ဘတ်အလယ်တည့်တည့်နှင့် ပုခုံး အရှေ့ခြမ်းတို့၌ အဖြစ် များ ပါသည်။ အောင့်သည့်ပုံစံမှာ စူး၍ အောင့်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ဖိနှိပ်ပွတ်တိုက်ခံရခြင်း (သို့) အလွန်အမင်း ကိုက်ခဲစေသည့် အောင့်ခြင်းမျိုးကို ခံစားရသည်။ ထို့အပြင် နှလုံးကြောင့်ဖြစ်သော ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ အနေအထားပြောင်းခြင်း၊ အစား စားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ကြောင့် ပိုမိုနာကျင်စေခြင်း မရှိပါ။ နှလုံးကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါက ချက်ချင်း ဆရာဝန်နှင့် ဆေးရုံ အကူအညီ အရေးပေါ် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ရင်ကြပ်လာပြီး ရင်ဘတ်ကို ဖိ၍ ဆုပ်ညှစ်ခံထားရသည့် အောင့်ခြင်းမျိုးကို ခံစားရပါသည်။ များသောအားဖြင့် ရင်ဘတ် အလယ် တည့်တည့် တွင် ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း (သို့) အားကစားလုပ်နေချိန်နိုင် ရုတ်တရက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အနားယူလိုက်ပါက သက်သာ သွားလေ့ရှိသည်။
အဆုပ်ပွခြင်း သည် အဆုပ်ကို အဓိကဖွဲ့စည်းထားသည့် လေအိတ်အသေးများ ( Alveoli) တွင် ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါပိုးများ ၀င်ရောက်နေသည့် ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ နှာခေါင်းမှ ရှူသွင်းလိုက်သော အောက်စီဂျင်များကို အဆုပ်လေအိတ်နံရံရှိ ဆံချည်မျှင် သွေးကြောများ မှတဆင့် နှလုံးသို့ပို့ဆောင် ရပြီး နှလုံးမှတဆင့် အောက်စီဂျင်ကို သွေးက ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ သယ်ဆောင်ပြီး ဖြည့်ပေး ရပါသည်။ အဆုပ်ပွ သောအခါ လေအိတ်များတွင် ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် လေအိတ်တခုလုံး (သို့) လေအိတ်နံရံရှိ ဆံချည်မျှင် သွေးကြောများ ပျက်စီးနိုင်ပြီး အဆုပ်ပုံမှန် အလုပ်မလုပ်နိုင်ပဲ အဖျားဝင်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် ရင်ဘတ် အောင့်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေ ပါသည်။ မကုသပါက ဘတ်တီးရီးယားများ အဆုပ်တခုလုံး ပြည့်သွားနိုင်သောကြောင့် လေအိတ်များ ပျက်စီးပြီး ခန္ဓာကိုယ်အား အောက်စီဂျင် မပေးနိုင်သောကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
အဆုတ် အမြှေးပါး ရောင် လျှင် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်စေနိုင်၍ အသက်ရှူခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားခြင်း တို့ကြောင့် ပိုအောင့်နိုင်ပါသည်။
အစာအိမ် ရောဂါတခုခုကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်နိုင်ပါသည်။ အစာအိပ်တွင် ဟိုင်ဒရိုကလိုရစ် အက်ဆစ်ပါရှိပြီး အစာအိမ်အား ထူထဲသော အချွဲများဖြင့် ကာကွယ်ထားပါသည်။ အကယ်၍ အစာအိမ်ရောဂါ ရှိသူများတွင် အစာအိမ် ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်နိုင်သောကြောင့် ယင်းအား အစာအိမ်နံရံရှိ ချွဲများမှ ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်သည့်အခါ အက်ဆစ်များမှ အစာအိမ်နံရံသို့ ရောက်ရှိလောင်ကျွမ်းနိုင်ပြီး ပူ၍နာကျင်ခြင်းနှင့် အသက်ရှူကြပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ရင်အုံရိုး အနောက်ဘက်ရှိ နံရိုးနှင့်ဆက်ထားသော အရွတ်တခု (သို့) တခုထက်ပို၍ ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး ပူ၍နာကျင်ခြင်းကြောင့် ရင်ဘတ် အောင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
သွေးခဲ တခုခုသည် သွေးကြောအတွင်း၌ မျောပါနေလျင် ခန္ဓာကိုယ်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ ထို သွေးခဲ သည် အဆုပ်တွင်းရှိ အဓိကသွေးလွှတ်ကြောတခုခုအား ပိတ်ဆို့သောအခါ ( Pulmonary embolus) ကို ဖြစ်စေပြီး ပိတ်ဆို့ခံရသော အဆုပ် ၏ အစိတ်ပိုင်းကို ပျက်စီးစေခြင်းဖြင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းနှင့် အသက်ရှူ ကြပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
ရင်ဘတ် အောင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် တခြားအကြောင်းရင်းများ
(၂) နာ့ဗ်ကြော၌ ဗိုင်းရပ်ပိုးဝင်ရောက်နေခြင
(၁၀) သည်းခြေအိတ်တွင် ရောဂါဝင်၍ ရောင်ခြင်း (Cholecystitis) စသည်တို့ကြောင့်လည်း
... ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေ နိုင်ပါသည်။
မည်သူမဆို မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်သည်ဖြစ်စေ ရင်ဘတ်အောင့်သည့် ဝေဒနာကို တစ်ကြိမ်ထက်မက ခံစားရပါက အန္တရယ်ရှိနိုင်သည်ကို နှလုံးမူ၍ ရောဂါကို အတိအကျသိရှိရန်နှင့် အချိန်မီကာကွယ်၊ ကုသနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် မဖြစ်မနေ တွေ့သင့် ပါသည်။ မိမိ ကိုယ် မိမိ အစာအိမ်ရောဂါ (သို့) နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နေသည်ဟု ယူဆနေသူများအနေဖြင့်လည်း ထိုရောဂါများ အမှန်တကယ် ရှိနေပါက ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ မိမိသန်ရာ ဆေးများ သုံးစွဲနေခြင်းသည် ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေမည် မဟုတ်သည့်အပြင် ပိုမို ပွားလာစေရန် မွေးထားသည်နှင့်ပင် တူနေသဖြင့် အန္တရယ် ကြီးမား လှကြောင်းကို သတိပေးရင်း မိမိ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြပါရန် အကြံပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။
Credit - Public Health in Myanmar
အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်သော သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီး မှုများ၏ အရေးပါမှုများ၊ အနာဂတ်အလားအလာအကြောင်း ဟောပြော သွားမည်...
2:14:00 PM Myanmar News Updates No comments
Electrical and Electronic နှင့် Mechanical Engineering ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက် သည့် ပညာရပ်နှင့်သုတေသနတီထွင်ဖန်တီးမှုများ၏ အရေးပါမှုများ၊
နောင်တွင် အသုံးပြုလာမည့်နည်းပညာသစ်အကြောင်းအရာများနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ PSB Academy တွင်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပို့ ချနေသော ဒေါက်တာမောင်အေးသိန်းကဇွန်လ(၃)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၁)နာရီ မှ (၁၂) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု အေဂျင်စီတွင်
ဟောပြောသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို AGTI, HND Electrical, Mechanical လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများ၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ PSB Academy တွင်သင်ယူ၍ သြစတြေးလျနိုင်ငံ University of Newcastle မှပေးအပ်သော BE (Electrical Engineering) နှင့် (Mechanical Engineering)အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ (၁၆၀၀၀) ပေးအပ်သွားမည့်အစီအစဉ်ကို ထည့်သွင်းပြောကြား
*** ရုန်းရင်းကန်ရင်း ***
ဘယ်မှာ မျက်ရည် ကျန်မည်နည်း။
ရုန်းရကန်ရ မည်တကား။ ။
ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း ၁၉၇၀ပြည့်နှစ် ဧပြီလထုတ်
12:13:00 PM Myanmar News Updates 1 comment
ဟိုနေ့က ကျွန်တော့်ကို အစ်ကိုတစ်ယောက် အကူအညီ တောင်းလို့ ဒီအကြောင်းအရာလေးကို တစ်ခြား မသိ့သေးတဲ့ သူတွေပါသိ့အောင်ဆိုပြီး Post ရေးပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီအစ်ကိုက သူ့ဖုန်းကို ဆိုင်မှာ မြန်မာ Fonts သွားထည့်တော့ ဆိုင်က ပြောတယ် ။ အစ်ကို့ဖုန်းက တစ်ခြားဖုန်းတွေလို မဟုတ်ဘူး။ root လုပ်ရတာလဲ မလွယ်ဘူး။ အရမ်းခက်တယ်တဲ့။ service ကြေး 13000 တောင်းတဲ့သူက တောင်း ၊ 15000 တောင်းတဲ့သူကတောင်းနဲ့ ။ ဘယ်ဆိုင်တွေလဲ ဆိုတာတော့ မရေးတော့ပါဘူး။ အဲဒီအစ်ကို ကိုင်တဲ့ဖုန်းက Samsung Galaxy Y GT-S5360 ပါ။ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီ အစ်ကိုဖုန်းကို စမ်းလုပ်ပေးရင်းနဲ့ တစ်ခြား မသိ့သေးတဲ့ သူတွေပါ အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ ပုံတွေနဲ့ သေချာ ရှင်းမပြနိုင်တာတော့ နားလည်ကြပါ။ ဒါပေမဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ။
Root ဆိုတာ ဘာလဲတဲ့။ မူလတန်း ကလေးတောင် သိ့ပါတယ် ။ အမြစ် ပေါ့ ။ အမြစ် ဆိုမှတော့ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ အသက် ၊ လေဒဏ် ၊ မိုးဒဏ် တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ့။ နည်းပညာမှာတော့ ဒီ Root ဆိုတာ Linux Open Source Operation System ရဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပါ။ Android ဆိုတာလဲ linux ကိုအခြေခံ ဖန်းတီး ပြုလုပ်ထားတာပါပဲ။ Root ဆိုတာက Linux မှာဆိုရင်တော့ System ရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတည်ရှိရာ နေရာကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Android Phone တွေမှာဆိုရင်လဲ ဖုန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ လည်ပတ်တဲ့ စနစ်ကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ အဓိက နေရာ တစ်ခုပါ။ ဥပမာ - Windows Xp/7စသည်ဖြင့် windows အသုံးပြု Computer တွေမှာဆိုရင်လဲ Windows ရှိနေတဲ့ (Eg: C:/ )နေရာမျိုးပေါ့။ အဲလောက်ဆို နားလည်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Android Phone တွေမှာ Root လုပ်ရတာလဲ ..... ??
Root ဆိုတာ ဘာလဲ ။ ဘယ်လို နေရာမျိုးလဲဆိုတာ စာဖတ်သူ သဘောပေါက်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲလို အဓိကကျတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေရာ ၊ တစ်ခုခု မှားလုပ်မိရင် System တစ်ခုလုံး သုံးမရအောင် ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးကို ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ သူတွေက ကွယ်ဝှက်ထားပါတယ်။ အသုံးပြုသူ user တွေ မတွေ့အောင် ၊ အသုံးပြုလို့ မရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ?? ရှင်းရှင်းလေးပါ .. ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ......
Root မလုပ်ပဲ Official သုံးနေလို့ရောမရဘူးလား။ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်။ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်လေးသုံးချင်တယ်။ website တွေ ၊ Forun တွေ ၀င်ကြည့်ချင်တယ်။ Chatting ထိုင်ချင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ဖုန်းမှာ မြန်မာလို အသုံးပြုချင်တယ်။ မြန်မာလို စာရိုက်ချင်တယ်။ နောက်တစ်ခု ကိုယ့်ရဲ့ Android Version ကို Update လုပ်ချင်တယ်။ အသစ်အသစ် လေးတွေကို လူတိုင်းမက်မောတက်ကြတာပဲလေ။ ဖုန်းဝယ်ကတည်းက ပါလာတဲ့ Application တွေမှာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမ၀င်တာတွေက များနေတယ်။ ဖြုတ်ချလို့လဲ မရဘူး။ နောက်တစ်ခါ Android Application တွေကလဲ အစုံပဲ။ ပေါလိုက်တာ ။ IPhone လိုပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်ထည့်စရာလဲ မလိုဘူး။ game တွေကလဲ အစုံပဲ။
စိတ်ကူးရှိတိုင်းထည့်နဲ့ ဖုန်းမှာပါတဲ့ Internal memory မှာတစ်ဖြည်းဖြည်းများလာမယ်။ အဲဒီအခါ ဖုန်းက လေးလာတယ်။ SD Card ထဲရွှေ့ထားချင်ပေမဲ့လည်း ရွှေ့လို့ မရဘူး။ နောက်ကိုယ့်ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို Backup လုပ်ထားချင်တယ်။ မတော်လို့ ဖုန်းကပျက်သွားရင် အထဲက မှတ်ထားတဲ့ Content တွေ ၊ Message တွေ စသည်ဖြင့် အများကြီးပဲ။ ပျက်တာ သွားရင်တော့ ကြေကွဲပြီ။ အဲဒီလို ပြဿနာတွေ အများကြီးကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက်က တစ်နည်းပဲ ရှိပါတယ်။ ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေ ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ Root နေရာ ၊ သူတို့တွေ ဖျောက်ထားတဲ့ SuperUser ကို ကျွန်တော်တို့က လုယူကြရမှာပေါ့။ SuperUser ဆိုတာတစ်နည်းအားဖြင့် Windows မှာလိုဆိုရင်တော့ Administrator လိုမျိုးပါ။ Android OS တစ်ခုလုံးကို စိတ်ကြိုက် မွှေနှောက်ခွင့်ရှိတဲ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ပေါ့။ အဲဒီလို System တစ်ခုလုံးကို စိတ်ကြိုက်မွှေနှောက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Android ကို Root လုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလောက်ဆို ဘာကြောင့် Root လုပ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စသည်ဖြင့် အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းမှာ မွှေနှောက်ပြီး ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Site တွေ၊ Forum တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါက မသိ့သေးတဲ့ သူတွေအတွက် ဗဟုသုအဖြစ် ရေးလိုက်တာပါ။ အဓိကကတော့ အခြေခံ သဘောတရားကို သေချာ နားလည်ဖို့ပါပဲ။
Step2> update.zip file ကို download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းရဲ့ SD-Card ထဲကို Copy ကူးထည့်လိုက်ပါ။ Copy ကူးပြီးပြီဆိုရင် SD-Card ကို ဖုန်းထဲကို ပြန်ထည့်ပြီး Power ပိတ်လိုက်ပါ။
Step3> တတိယ အဆင့်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Recovery Mode ထဲကို ၀င်ရပါမယ်။ Recovery Mode ထဲကို ၀င်ဖို့အတွက် (Home Button + Volume up Button + Power Button ) ကို Seconds 20 လောက် ဖိနှိပ်ထားလိုက်ပါ။
Step 6> Root စလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ကြည့်နေလိုက်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ Root လုပ်တာ ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဖုန်းကို Reboot လုပ်လိုက်ပါ။
အိုကေသွားပါပြီ ။ ဖုန်းပြန်ပွင့်လာတဲ့အခါ SuperUser စက်ရုပ်လေးရောက်နေပါ့လိမ့်မယ်။ ဒါဆို ခင်ဗျားဖုန်းကို စိတ်ကြိုက် ကလိလို့ ရသွားပါပြီ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ .... လေးစားစွာဖြင့် .... သူရ
Facebook က အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ posts လေးကို ရေးလိုက်တာပါ။
Zawgyi Fonts ကိုထည့်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့က Android System ကို လှည့်စားပြီးထည့်ပေး
ရပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက System file တွေထဲကို ၀င်ပြင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်ခါမှ
ကျွန်တော် အဆင်ပြေအောင် အဆင့် (3) ဆင့်နဲ့ ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
သွင်းတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့က android ရဲ့ system file ထဲကို ၀င်ပြီး ထည့်ပေးရမှာပါ။ အဲဒီအတွက်
ထဲက Unknown Source ကိုဖွင့်ထားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Download ဆွဲထားတဲ့ File ကို phone ရဲ့ SD Card ထဲကို ထည့်ထားပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲက File Manager ကိုဖွင့်ပါ။ ဒါကတော့ ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ပုံစံ
ကွာခြားတက်ပါတယ်။ အဲဒီ File Manager ထဲကမှတစ်ဆင့် SD Card ထဲကို copy ထည့်ထားတဲ့ Root
Zawgyi Fonts Install လုပ်ဖို့အတွက် အစောက ထည့်ထားခဲ့တဲ့ Root Explorer ကိုဖွင့်ပါ။ software
ကိုဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာ Superuser Request ဆိုပြီး လာတောင်းခဲ့ရင် Allow ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Root Explorer
ဖွင့်တာနဲ့ / ထဲကို ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါက Roots လို့ ခေါ်ကြတဲ့ Directory ပါပဲဗျာ။ အဲဒီထဲကမှ
ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် ဘာမှ မနှိပ်မိပါစေနဲ့ ။
Warning Box တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မယ် ။ read only ဖြစ်နေလို့ copy ကူးလို့ မရဘူးလို့ ပြောတာပါ။
ဆိုပြီး ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆို Write လုပ်လို့ ရသွားပါပြီ ။ Paste ကို ပြန်နှိပ်လိုက်ပါ။
fonts ကို android fonts နဲ့ အစားထိုးလှည့်စားလိုက်တဲ့ သဘောပါ။ အဲဒီအတွက် Zawgyi fonts ဆိုတဲ့
box တစ်ခု ထပ်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ DroidSans.ttf ဆိုတဲ့ Fonts က ရှိပြီးသားကြီး ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့
နောက်ဆုံး အဆင့် တစ်ခု ကျန်ပါသေးတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ overwrite လုပ်ပြီး ထည့်လိုက်တဲ့
ကြည့်လို့ ရသွားပါပြီ ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်တော့ စာရိုက်လို့ မရသေးဘူးဗျ ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Keyboard မထည့်ရသေးဘူးလေ ….
အခု ကျွန်တော် DroidSans.ttf ဆိုတဲ့ File ကို အစားထိုးပြီး Zawgyi Fonts ထည့်နည်းကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခုလည်း ပါပါသေးတယ် ။ အကယ်၍ တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ DroidSans.ttf ကို ထည့်လို့မှ မြန်မာလို
မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် DroidSansFallback.ttf ကိုပါ အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ နည်းအတိုင်း ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
DroidSans.ttf ကိုထည့်လို့ မြန်မာလို ပေါ်ခဲ့ရင်တော့ ထပ်မထည့်ပါနဲ့ ။
Zawgyi Keyboard ထည့်သွင်းဖို့အတွက်လဲ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ထဲက FrozenKeyboard_1.1.3.apk
ကို SD Card ထဲ ထည့်ပြီး Software ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။
အဲဒီထဲမှာမှ Frozen Keyboard ဆိုတာ နှစ်ခု ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုက Setting အတွက်ပါ။
အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့က Frozen Keyboard ကို ဖွင့်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Frozen keyboard Settings
အဲဒီမှာ သတိပေးတဲ့ message တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ OK ကိုသာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာစာ keyboard က တစ်ကယ်အလုပ်မလုပ်ကို Message မှာ စမ်းရိုက်ကြည့်ပါ။
အဲလောက်ဆို၇င်တော့ ကိုယ့်ဘာကိုယ် စမ်းလို့ အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်ပါတယ် ….. သေချာ အသေးစိတ်
ကိုယ်ဘယ်လောက်စိတ်ညစ်နေနေ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုတော့ ရအောင်အားပေးတယ်။
ကိုယ်မှာဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းမှုရှိပါစေ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုတော့ ပျော်အောင်စတတ်တယ်။
ကိုယ်ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနေပါစေ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့ ပင်ပန်းမှုတွေနားထောင်ပြီးမှ နားဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ဘယ်လောက်နေမကောင်းဖြစ်နေပါစေ ကိုယ်ချစ်သူကို နေကောင်းရဲ့လားလို့ အရင်မေးမိတတ်တယ်။
တချို့အချစ်တွေက သူမပေးလဲ အလိုလိုပျော်ရွှင်တတ်စေတယ်။ အလိုလိုခွန်
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချစ်ဆုံးရှုံးသွားချိန်မှာလဲ ပိုမိုခံစားရသလို၊ ပိုပြီး ဖြေဖျောက်ရခက်စေတယ်။
( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၉ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ )
11:46:00 AM Myanmar News Updates No comments
ဒေါ်လာ >> ၁ ဒေါ်လာ = ၉၄၃ - ၉၅၁ ကျပ်
[ ၀ယ်ဈေး = ၉၄၃ ကျပ် // ရောင်းဈေး = ၉၅၁ ကျပ် ]
ဒေါ်လာ >> ၁ ဒေါ်လာ = ၉၄၀ - ၉၄၃ ကျပ်
[ ၀ယ်ဈေး = ၉၄၀ ကျပ် // ရောင်းဈေး = ၉၄၃ ကျပ် ]
11:45:00 AM Myanmar News Updates No comments
မနက်ပိုင်း ( ၁၀:၄၅ မိနစ် ) - ၇၀၈,၀၀၀ ကျပ်
မနက်ပိုင်း ( ၁၀:၄၅ မိနစ် ) - ၇၀၇,၅၀၀ ကျပ်
မနက်ပိုင်း ( ၁၀:၄၅ မိနစ် ) - ၁၃၈၆ ဒေါ်လာ/အောင်စ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Electronic Textbook များအသုံးပြုနေ..
11:43:00 AM Myanmar News Updates No comments
တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှိစာသင်ကျောင်း(၂၀)ခန့်တွင် Electronic Textbook များကို ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များနေရာတွင်အစားထိုးအသုံးပြုလျက် ရှိကြောင်းသိရသည်။ DESPERATE အသုံးပြုရေး စီမံကိန်းကို ဦးဆောင်ခဲ့ သောShaanxi ပြည်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများက"အခုလို Electronic Textbook တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက် သင်ယူရေးနဲ့ သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေ လွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်တယ်"ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ကျောင်းသားမိဘတချို့သည် Electronic Textbook အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်းသိရသည်။ ကျောင်းသားများသည် Electronic Textbook မှ သင်ခန်းစာများကိုသင်ယူရမည်ကို စိတ်ဝင်တစားဖြစ်ပြီး ကျေနပ်ပျော် ရွင်နေကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် Electronic Textbook များ ကို ပြီးခဲ့သောစက်တင် ဘာလမှ စတင် အသုံးပြုခဲ့ပြီးဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ Electronic Textbook အသုံးပြုပြီးစာသင်
Electronic Textbook အသုံးပြု သောပညာသင်ကြားမှုသည် ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို
မိဘအချို့ကစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒေသခံပညာရေးဌာနကသင်ကြားရေး စီမံကိန်းကိုနောက်ထပ် ၂နှစ်ကြာ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်မည်
“ ချစ်ခြင်းမှာ အစွန်းမရောက်ပါစေနဲ့ ”
“ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့
နေရာမှာ ကိုယ့်စိတ်ချမ်းသာဖို့ တစ်ခု
တည်းကို ကြည့်ပြီး ချစ်ခဲ့ရင် အင်မတန်မှ
ချစ်ခဲ့ရင် သူကိုယ်တိုင် စိတ်ချမ်းသာ
သလို၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အေးချမ်း
-“ ဋ္ဌေး ”-သာမဏေကျော်ဆရာတော်
အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးဂျာစီပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ လယ်သမားမိသားစုဟာ Oscar ဆိုတဲ့ကြောင် ကလေး ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အသက် ၂ နှစ်ခွဲအရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Oscar ဟာပြောင်းဖူးချွေစက်အတွင်း မတော်တဆပြုတ်ကျရာမှ သူ့ရဲ့နောက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ ၎င်းရဲ့ပိုင်ရှင်မိသားစုမှ တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနမှာ Oscar ကိုဇီဝခြေတုနှစ်ဖက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။ ဇီဝခြေတုတပ်ဆင်ထား တဲ့ ကြောင်ကလေး Oscar ဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေထဲမှာ ခြေတုတပ်ဆင်ခြင်းကို
ပထမဆုံးစမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ထိုကဲ့သို့ဇီဝခြေတုတပ်ဆင်ထားပေမယ့် မူလကအတိုင်းပုံမှန် ကြောင်တစ်ကောင်လို သွားလာနိုင်နေတဲ့ Oscarဟာ သူ့ရဲ့လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုတွေကြောင့် ဂင်းနစ်စံချိန်မှာ ဖော်ပြပေးဖို့ထိုက်တန်ခဲ့ပါတယ်။
၁။ အစာနှင်းခိုင်းဝမ်းကိုနိူင်း ၀င်တိုင်းမစားနဲ့။
၂။ နေ့ညချင်းနူန်း ကာလပိုင်း ပျော်တိုင်းမအိပ်နဲ့။
၃။ သူတစ်ပါးကို အမျက်လို ပြင်သို့မထွက်နဲ့။
၄။ သရမ်းမော်ကား နူတ်ထွက်ကြား စကားမကြံနဲ့။
၅။ ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ ပါးစပ်ကို သတိနဲ့ဖွင့်ပါ ။
၆။ နေလိုတောက်ပတုန်းက မမောက်မာခဲ့ရင် ၀မ်းလိုခြောက်သွေ့သော်လည်း ကြောက်စရာမရှိပါ။
၇။ ဘ၀ဆိုတာ တိုက်ပွဲတစ်ခု ဘ၀င်မမြင့်ပါနဲ့။
၈။ ဘ၀ကိုသာ ပြုပ်ပါ ကျွေးသောလက်ကိုမကိုက်ပါနဲ့။
၉။ ထမင်းကျွေးသောအလုပ်မှာ တာဝန်ကျေပါ။
၁၀။ မိတ်ဆွေသူပြုံးနေသည် အကြွေးယူတော့မည် ။
၁၁။ သူဋ္ဌေးလောင်းကို အကြွေးမရောင်းပါ။
၁၂။ စည်းကမ်းရှိမှ တိုးတက်မည်။
၁၃။ အချိန်ရှိခိုက် လုံးလစိုက် လသာတုန်း ဗိုင်းငင်ပါ။
၁၄။ မိုးရွာတုန်း ရေခံပါ မိုးလွန်မှ ထွန်မချပါနဲ့။
Android အတွက် Photo Editor 3.0
9:25:00 AM Myanmar News Updates No comments
Android ပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံတွေကို တည်းဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခုပါ version 3.0 တောင် ရောက်နေပီ 15.58MB လေးပါ ဒေါင်းထားသင့်တယ်နော်
Feature တွေကတော့ အောက်မှာသာ ဆက်ဖတ်လိုက်ပါတော့
မြန်မာ့ ငလျင် မှတ်စု
ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ငလျင်ရပ်ဝန်း နှစ်ခုရှိရာ ပစိဖိတ် မီးတောင်ရပ်ဝန်း၊ အယ်လ်ပိုက်ရပ်ဝန်းဟူ၍ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း နှင့် အနောက်ပိုင်းတို့သည် အယ်လ်ပိုက်ရပ်ဝန်းတွင် ကျရောက်သည်။
ယင်းရပ်ဝန်းသည် ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းမှ အရှေ့ဘက် တရုတ်နိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကပ္ပလီကျွန်း နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ပါဝင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၂ ဒီဂရီ၏ မြောက်ဘက်တွင် ငလျင် ပိုလှုပ်နိုင်သည်ဟု
ငလျင် မလှုပ်နိုင်ဆုံးဒေသ မှာ တ န င်္သာ ရီ ဒေ သ ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်
အလယ်ပိုင်း နှင့် အနောက်ပိုင်းသည် ယနေ့ထိ လှုပ်ရှားဆဲရှိသည်။
အောက်တွင် အမြင့်ဆုံးလှုပ်နိုင်သည့် ငလျင်အင်အားအဆင့်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ရခိုင်ရိုးမသည် နာဂတောင်၊ ချင်းတောင်၊ ပတ်ကွိုင်တောင်တို့ထက် ငလျင်လှုပ်နိုင်ခြေ နည်းသည်။
ရခိုင်ရိုးမ ၏ အံလွဲကြောင်းမှာ အရေးမကြီးလှချေ။ ကျောက်လွာဖွဲ့စည်းမှုမှာ ရှုပ်ထွေးမှု မရှိ။
အနောက်ရိုးမမြောက်ပိုင်းဒေသ၏ ကျောက်လွှာဖွဲ့စည်းပုံမှာမူ ရှုပ်ထွေးသည်။ တည်ငြိမ်မှု မရှိ။ ယင်းဒေသတွင် ငလျင်ဗဟိုချက် အများ အပြားတွေ့ရှိရပြီး ပြင်းထန်သော ငလျင်များလည်း လှုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ အာသံဘက် နီးလာလေအင်အား ပိုမြင့်လာလေဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၊ မြေနိမ့်ရပ်ဝန်းဒေသဖြစ်သည်။ ကျောက်လွှာများ တည်ငြိမ်မှု ရှိသော်လည်း
ယင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ပဲခူးရိုးမ၏ ကျောက်လွှာမှာ တည်ငြိမ်မှု မရှိသေးသောကြောင့် ငလျင်လှုပ်နိုင်သေးသည်။ ဤ ရပ်ဝန်းတွင် လှုပ်ခဲ့သော ငလျင်များမှာ ဗဟိုချက်တိမ်ပြီး အင်အားသေးကာ ဧရိယာကျဉ်းကျဉ်းလေးတွင်လှုပ်ရှားတတ်သည်။
ပျှမ်းမျှ အင်အားအဆင့် (၆)သာ ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၇၅ ပုဂံ -ညောင်ဦး
ငလျင်သည် အင်အား (၆.၈) လှုပ်ခဲ့သည်။ အံလွဲကြောင်းများ နှင့် ပဲခူးရိုးမ ကျောက်လွှာများ လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပဲခူးရိုးမအလယ်ကြော နှင့် ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့် အစွန်းတွင်မူ အင်အား(၉)အထိ လှုပ်နိုင်သည်။
ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်သည် အခြားဒေသများထက် ပို၍ တည်ငြိမ်သည်။ သို့ရာတွင် အနောက်ပိုင်း အံလွဲကြောင်းများကြောင့် အင်အား(၉)အထိ လှုပ်နိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့် ထိစပ်နေသော ဒေသများတွင် အင်အား(၆)ထက် ပို မလှုပ်နိုင်ဟု ဆိုသည်။
ပြင်းထန်သော ငလျင်လှုပ်နိုင်သည့် ရပ်ဝန်းဖြစ်သည်။ ငလျင်အင်အားအဆင့်(၉)ထက်ပင် ပိုနိုင်သေးသည်။
ထင်ရှားရှည်လျားသော ပြတ်ရွေ့ အံလွဲကြောင်းများ မရှိခြင်း၊ ကျောက်များ သက်တမ်းရင့်နေခြင်းတို့ကြောင့်
ဤရပ်ဝန်းကို ဗဟိုပြု၍ ငလျင်မလှုပ်ခဲ့ချေ။ ကမ်းရိုးတမ်းတွင် လှုပ်ခဲ့သော မှတ်တမ်းအရ အင်အား(၆)အထိသာ လှုပ်နိုင်ပြီး ငလျင် အန္တရာယ်မှ စိတ်အချရဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားမှာ ကမ္ဘာအေးမြေငလျင်ဌာန၏ ယူဆ သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အဖြခံထားပြီး
(စာပေဗမာန်ထုတ်၊ ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ် -မြန်မာ့ငလျင်စာ-၈၇- ၁၉၇၈)
၁။ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ အမရပူရ၊ ပဲခူး၊ ဖြူး
၂။ တောင်ကြီး၊ လားရှိုး၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ၊ ခန္တီး၊ မော်လိုက်၊ ကလေးဝ၊ တောင်ငူ၊ ပြည်၊ သရက်
၃။ ပျဉ်းမနား၊ ရမည်းသင်း၊ မကွေး၊ မင်းဘူး၊ မုံရွာ၊ မော်ချီး၊ လိါုင်ကော်၊ ရန်ကုန်၊ ပုသိမ်
၄။ မိတ္ထီလာ၊ ပခုက္ကူ၊ ချောက်
၅။ မော်လမြိုင်၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်
ရန်ကုန် ငလျင် .....
ရန်ကုန်မြို့အောက်တွင် အားနည်းသော မြေကြောရှိနိုင်သည်။ (Geological Surver of India .. Brown J.C)
ရန်ကုန် ငလျင်နှင့်ပတ်သက်၍ (1436) ခုနှစ် တွင် လှုပ် ခဲ့ ကြောင်း ပထမဆုံးတရားဝင် မှတ်တမ်းရှိခဲ့သည်။
(1470) စက်တင်ဘာ(၉)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင်ငလျင်ကြီးလှုပ်ခဲ့ပြီးအကြိုငလျင်(၂၅)ကြိမ်၊ နောက်ဆက်
တွဲငလျင်အကြိမ်(၅၀)၊ နှစ်လအတွင်း လှုပ်ခဲ့ သည်။
ဒဏ်အားကို တစ်ကြိမ်တည်း ခါ မ ထုတ် ပစ် ခြင်းကရန်ကုန်ကို သက်သာစေသည်ဟု ဆိုကြကုန်သည်။
(1620 ၊ 1644 ၊ 1662 ၊ 1664 ၊ 1679 )တို့တွင်လည်း ငလျင်များ လှုပ်ခဲ့သည်။
၄င်းနောက် နှစ်ပေါင်း(၂၀၀)နီးပါး မလှုပ်ပဲ နေခဲ့ရာမှ(1768) ဇွန်လတွင် လှုပ်ခဲ့ရာ ရွှေတိဂုံ ပထမဖောင်းရစ်ထိ ပြိုကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(1927 )ဒီဇင်ဘာ(၁၇)ရက်တွင်လှုပ်ခဲ့သော ငလျင်ကို ဟ့သာဝတီ၊ အင်းစိန်၊ မအူပင်ခရိုင်များတွင်ပင် ငလျင်
အကျိုးဆက်ကို ခံစားရပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်ပေါ် အောက်ခံကျောက်ထုများ အက်ကွဲကြောင်းများ အတိုင်း
(1930) မေ (၅)ရက်ည ရန်ကုန်ငလျင်သည် ပဲခူးမြို့အနီးကို ဗဟိုပြုခဲ့ပြီး အဆင့်(၈)ကျော်ကာ ရန်ကုန်ငလျင်
သမိုင်းတွင် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲငလျင်များ လှုပ်ခဲ့ပြီး နှစ်(၂၀)ခန့် ငြိမ်သက်နေကာ
အင်အားသေး ငလျင်များ လှုပ်ခဲ့သည်။
(1930) မေ (၅)ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့တွင် လှုပ်ခဲ့သော ငလျင်မှာ အပြင်းထန်းဆုံး ဖြစ်သည်။
ပဲခူးငလျင် မှတ်တမ်းတင်သည့် ဘီစီ 197 နောက်ပိုင်းတွင် (၃၂)ကြိမ်မြောက် ငလျင်ဟု ဖော်ပြကြသည်။
အဆင့်(၁၀)ရှိပြီး စတုရန်းမိုင် ၂၂၀၀၀၀ ကို လှုပ် ခါ စေ ခဲ့ သည်။ လူ(၅၀၀)ခန့် သေ ဆုံး ခဲ့ ရသည်။
ငလျင်ဗဟိုချက်မှာ ပဲခူး တောင်ဘက် မိုင်(၂၀)အကွာ စစ်တောင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ် နုန်းမြေ အောက်တွင်
ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ လှုပ်ရှားမှုမှာ တစ်ကြိမ် နှင့် တစ်ကြိမ် နှစ်ပေါင်း(70) ပျှမ်းမျှ ကွာသည်။ တခါတစ်ရံ
(5)နှစ် ခြားပြီးလည်း လှုပ် တတ် သည်။
စစ်ကိုင်း ငလျင် ...
(1956)၊ ဇူလိုင်လ(၁၆)ရက်ညနေပိုင်းတွင် လှုပ်ခဲ့ပြီး ပြင်းထန်အား(၇)ခန့်ရှိသည်။
စစ်ကိုင်းတံတား နေရာရွေ့ခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှ ဘုရားများ ပြိုခဲ့ရာ လူအသေအပျောက်များလည်း
(1975) ဇူလိုင်(၈)ရက်နေ့တွင် ပြင်းအား (၆.၈) လှုပ်ခဲ့သည်။
ပခုက္ကူအနီး အရှေ့ဘက်သို့ အနည်းငယ်စောင်းသော ပြတ်ရွေ့ ကြောင်း လေးခု မှာ သမိုင်းတစ်လျောက်
သို့သော် 1975 ပုဂံငလျင်တွင် သူတို့ထကြွလာတော့သည်။ အနောက်မြောက် မှ အရှေ့
တောင်ယွန်းယွန်း ချောက် မှ ပခုက္ကူသို့ ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖြတ်နေသည်။ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀)ထက် မက
တည်ငြိမ်ခဲ့ပြီးမှ လှုပ်ရှားခဲ့ဟန်တူသည်။ ပုဂံနှင့် အနောက်တောင်ယွန်းယွန်း (၁၄)မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုသည်။
အကြိုငလျင် လုံးဝမရှိဘဲ ဆိုင်းမဆင့်ဘုံမဆင့်လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲငလျင်(၃)ကြိမ်လှုပ်သည်။
တုန်ခါသည့် ဧရိယာမှာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း(၂၀၀၀၀)ကျော်ရှိသည်။
ပုဂံ-ညောင်ဦး ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးစေတီများ ၉၀% ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
ဧရာဝတီ ရေစီးဆင်းမှု ရပ်သွားပြီး ရေပြင်တွင် လှိုင်းကြီးခဲ့သည်။
အခြားမြေပြင် အနေအထားများ ပြောင်းလဲမှု ရှိခဲ့သည်။
မင်းဘူး ရွှံ့မီးတောင် (၂)ပေခန့် နိမ့်ဆင်းသွားပြီးရွှံ့ ချော်ရည်များ ကျလာခြင်း၊ ရေတွင်းမှ ရေများ တိုးထွက်လာခြင်း၊ မြေအက်ကွဲကြောင်းများပေါ်လာခြင်းတို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။
1839 မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် အမရပူရ တစ်မြို့လုံးပျက်ဆီးစေခဲ့ပြီး လူ(၃၀၀)ကျော် သေဆုံးခဲ့သည်။
ပြင်ထန်အားအဆင့်(၉) အထိ လှုပ်ရှားသွားသည်။ စက္ကန့်(၃၀)မျှသာ ကြာသော်လည်း ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း
ပြောင်းပြန်စီးကာ မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းတော်ကြီး ပြုတ်ကျခဲ့ရသည်။
စစ်ကိုင်း-အင်းဝ နှစ်မြို့စလုံး အထိနာခဲ့ရသည်။
မြန်မာပြည်အတွင်း အပြင်းထန်ဆုံး လှုပ်ခဲ့သည့် ငလျင်ကြီးဟု ဆိုဖွယ်ရှိသည်။
1921 မေလ(၂၃)ရက်နေ့တွင် လှုပ်ခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း ၊
မိုးကုတ် ခရိုင်များတွင် အပျက်အစီးများ ရှိခဲ့သည်။ မေမြို့ငလျင်ဟု ခေါ်သော်လည်းဗဟိုချက်မှာတောင်ကြီးမြို့အနီးတွင်ကျရောက်သည်။ ပြင်းထန်အင်အားအဆင့်(၈)ရှိခဲ့ပြီး စတုရန်းမိုင် ၃၇၅၀၀၀အထိ လှုပ်ခါစေခဲ့သည် ။
(1930) မေ(၅)ရက် ပဲခူးငလျင်ဒဏ်ကို ပြင်းအား(၇)အထိ ခံလိုက်ရသော ဖြူးမြို့သည် ၄င်းနှစ်
ဒီဇင်ဘာလ(၃)ရက်နေ့တွင် ပ်ြငးအားအဆင့်(၉)အထိ ခံလိုက်ရပြန်သည်။ ငလျင်ဗဟိုချက်မှာလည်းဖြူးမြို့အနီးတွင် ဗဟို ပြုခဲ့သည်။
ပဲ ခူး င လျင် ၏ နောက် ဆက် တွဲ ဟု ယူ ဆ ခဲ့ ကြ သည်။
(1912) မေ(၂၃) တောင်ကြီးငလျင်သည် လားရှိုး နှင့် မိုင်(၂၅၀)ခန့်ဝေး၍ အင်အား(၇) မှ (၈)
(1923) ဇွန်(၂၂) ငလျင်တွင် အင်အား (၈)အထိ ခံလိုက်ရသည်။
(1921) ငလျင်သည် တောင်ကြီးမြောက်ဘက်(၂၁)မိုင်ကို ဗဟို ပြုခဲ့သည်။
အောက်ခံ ကျောက်လွှာ မတည်ငြိမ်သေး၊ အင်အား အသင့်သင့် နှင့် အင်အားသေး ငလျင်များ မကြာခဏ
လှုပ်လေ့ရှိသည်။ (1941) ဒီဇင်ဘာ ၊ (1950) ဖေဖော်ဝါရီ(၂)ရက်တို့တွင် အင်အား(၇)ဖြင့် လှုပ်ခဲ့သည်။
(1931) ဇန်န၀ါရီ(၂၇) ကာမိုင်းငလျင်၊ (1946) တကောင်းငလျင်တို့ကြောင့် အင်အား(၇) မှ (၈)
ဗန်းမော်မြို့အနီး ပြတ်ရွေ့ကြောင်းများမှာ တည်ငြိမ်မှု မရှိပါချေ။
9:19:00 AM Myanmar News Updates No comments
အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေက အရမ်းဂရုစိုက်ရမယ့် အသားအရေပိုင်ရှင်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် သေချာဂရုစိုက်ပေးရင် ၀င်းပကြည်လင်ပြီး ပိုတောင်ကြည့်လို့ကောင်းသေးတယ်နော်။ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေအကြောင်းနဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကိုတော့ အဆီပြန်တဲ့
အသားအရေအကြောင်း သိကောင်းစရာအဖြာဖြာ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ခုကတော့ ပေါင်းတင်နည်းတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေရှိတဲ့သူတွေဟာ အဆီပိုတွေနဲ့ ၀က်ခြံဖြစ်စေတဲ့ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်အောင် ချွေးပေါက်တွေ သန့်စင်ပြီး ချွေးပေါက်မကျယ်အောင် မှန်မှန်ပေါင်းတင်ပေးသင့်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ပေါင်းတင်နည်းတွေကို ရင်နှင်းပြောပြပေးမယ်နော်။
(၁) နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းနဲ့ ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်စာကိုရောပြီးရင် မျက်နှာအနှံ့လိမ်းပြီး ၁၀ မိနစ် ထားထားနော်။ ပြီးတော့ ရေအေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ မျက်နှာလေးဟာ သန့်စင်ပြီး ၀င်းပလာပါလိမ့်မယ်။
(၂) ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံး၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်းနဲ့ လိမ္မော်ရည်စက်အနည်းငယ်ကို ရောမွှေလိုက်နော်။ သေသေချာချာကြေညက်သွားရင် ရလာတဲ့အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ်မှာ ပါးပါးလေး သုတ်လိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ် လောက်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းလေးက မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်တွေကိုလည်း သန့်စင်စေပါတယ်။
(၃) ခရမ်းချဉ်သီး (အလတ်စား) တစ်လုံးကို အရည်ထွက်လာအောင် ကြိတ်ပါ။ ပြီးရင် သံပုရာရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်နဲ့ရောပြီး မျက်နှာပေါ်မှာလိမ်း၊ ၁၀ မိနစ်ထားပြီးရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။ ချွေးပေါက်ကလေးတွေကို ကျဉ်းစေတဲ့အပြင် ၀က်ခြံတွေကိုလည်း လျော့နည်းသက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
(၄) ရေစင်စင်ဆေးထားတဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီး ၄ - ၆ လုံးကို ခွက်ထဲထည့်ပြီး ခရင်းနဲ့ ချေလိုက်နော်။ ပြီးတော့ ဒိန်ချဉ်တစ်ဇွန်းနဲ့ရောပြီး မျက်နှာမှာ သုတ်လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ ထားပါ။ ပြီးရင် ရေအေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။
(၅) ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးပါတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးကို အခွံခွာ၊ အစိပ်သေးသေးလေးတွေ လှီးပြီး မွှေစက်ထဲ ထည့်ပြီး အနှစ်လေးရတဲ့အထိ မွှေပါ။ ပြီးရင် ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်းနဲ့ရောပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ ပါးပါးလေးလိမ်းပါ။ ၁၅ မိနစ် ပြည့်ရင်ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ ချွေးပေါက်ကျဉ်းပြီး နူးညံ့ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို တွေ့ရမှာပါ။
(၈) သခွားသီးကို အတုံးသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင်တုံးပြီး ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ဂျုံမှုန့် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးတစ်ခွက်စာနဲ့ မွှေစက်ထဲမှာ လုံးဝကြေညက်သွားတဲ့အထိ ထည့်မွှေပါ။ ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ ၁၀ မိနစ်လိမ်းထားပြီး မျက်နှာသစ်လိုက်နော်။ ဒီနည်းက ချွေးပေါက်တွေကို သန့်စင်စေပြီး ၀က်ခြံတွေလည်း သက်သာစေတယ်လေ။
တစ်ပတ်ကို တစ်ခါမှန်မှန် လုပ်ရင် အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်။ လုပ်ကြည့်နော် သူငယ်ချင်းတို့..။ ရင်နှင်းသူငယ်ချင်းလေးတွေ အမြဲကျန်းမာလှပပျော်ရွှင်ကြပါစေ..။ :pray
ကင်ဆာ နှင့် အာဟာရ
9:14:00 AM Myanmar News Updates No comments
ကင်ဆာ နှင့် အာဟာရ ( ကင်ဆာဝေဒနာရှင်များ အတွက် သိသင့်သည် )
ကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာကုထုံးအချို့တွင် အစားအစာနှင့် ဆက်နွှယ်သော ဆိုးကျိုးများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ အစာအာဟာရသည် ကင်ဆာရောဂါ ကုသမှုတွင် အရေးကြီးသော ကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
ကင်ဆာရောဂါ မကုသမီ၊ ကုသစဉ်နှင့် ကုသပြီးကာလများတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်အောင် အစားအစာကို မှန်ကန်စွာ စားသုံးရန်လိုအပ်သည်။ အခြေခံ အာဟာရခြောက်မျိုးမှာ ကစီဓာတ်၊ အဆီဓာတ်၊ ပရိုတင်းဓာတ်၊ ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များနှင့် ရေ (Carboyhydrate, Fat, Protein, Vitamin, Minerals and water) တို့ဖြစ်သည်။
အစားအစာ စားသုံးမှုအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သော လက္ခဏာအချို့မှာ အစားအစာ မစားလိုခြင်း၊ ပျို့ချင်အန်ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်း၊ ပါးစပ်၌ အနာများဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အစာမျိုချရာတွင် ခက်ခဲခြင်းနှင့် နာကျင်မှုတို့သည်လည်း အစားအစာ စားသုံးမှုအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။
အစားအစာ စားသုံးရာတွင် အရသာရှိမှု၊ အနံ့အသက် နှစ်လိုဖွယ်ရာဖြစ်မှုနှင့် စားလိုစိတ်တို့ ပြည့်စုံမှသာလျှင် အစားအစာ စားသုံးခြင်းအတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပြီး စားသုံးလိုက် သော အစားအစာများကို အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းမှ ချေဖျက်စုပ်ယူပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အာဟာရ ဖြစ်စေနိုင်မည် ဖြစ်၏။
အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ယိုယွင်းစေမည်ဖြစ်၏။ အားအင်ယုတ်လျော့ ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ရောဂါများကို ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း၊ ကင်ဆာလူနာများအတွက် ကင်ဆာကုထုံးများအပေါ် ခံနိုင်ရည်မကောင်းခြင်း စသည်တို့ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အစားအစာ စားသုံးရာတွင် စွမ်းအင်လုံလောက်မှု မရှိခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ပရိုတင်းဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင် အခက်အခဲများဖြစ်သည်။
ကင်ဆာလူနာများတွင် အာဟာရ ချို့တဲ့မှု အဓိကဖြစ်ကြရသည်မှာ. . .
(က) အစားအစာစားလိုစိတ် မရှိခြင်းနှင့်
(ခ) ခန္ဓာကိုယ် အထွေထွေယိုယွင်းလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကင်ဆာရောဂါ၏ အာဟာရအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
ကင်ဆာကလာပ်စည်းများသည် ဓာတုပစ္စည်းတချို့ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ယင်းဓာတုပစ္စည်း များမှာ ခန္ဓာကိုယ်၏ အာဟာရတချို့ သုံးစွဲမှုကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာရောဂါများသည် ကစီဓာတ်၊ အဆီဓာတ်နှင့် ပရိုတင်းဓာတ်တို့အား ခန္ဓာကိုယ်မှ အသုံးပြုမှုအပေါ် ပြောင်းလဲသွားစေတတ်သည်။
အချို့သော ဆေးဝါးများသည် ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာလက္ခဏာများကို သက်သာစေ သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမှု (Weight Loss) ဖြစ်စေသည်။ ကင်ဆာ ရောဂါကို စတင်ကုသချိန်၌ အစားအစာစားသုံးမှုကို ထိခိုက်စေပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းသွားစေသည်။ ထို့ကြောင့် ကင်ဆာရောဂါကုသချိန်ကာလတွင် အာဟာရ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် အစားအစာ စားသုံးမှုကို ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။
ကင်ဆာရောဂါကုထုံးများ၏ အာဟာရအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ အာဟာရနှင့် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ပိုမိုမြင့်မား စေသည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းအင်အပိုရရှိရန်နှင့် အာဟာရပြည့်စုံလုံလောက်ရန် အရေးကြီး ပါသည်။ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း မပြုမီမှာပင် လူနာအား အာဟာရချို့တဲ့မှု ကင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ အာဟာရအခြေအနေအကောင်းမွန်ဆုံးရှိပါက ခွဲစိတ်ကုသမှု အတွက် အောင်မြင်မှုနှင့် အကျိုးရလဒ်ကောင်းရရှိစေမှုတို့ ဖြစ်စေသည်။
ကင်ဆာရောဂါကို ဆေးဝါးများဖြင့် ကုသခြင်း (Chemotherapy) ၌လည်း အာဟာရ အရေးကြီးသည်။ ဆေးဝါးများလျှင် ကင်ဆာကလာပ်စည်းများ အပါအဝင် အလျင်အမြန် ပွားများတတ်သောကလာပ်စည်းကို ဖိနှိပ်တိုက်ဖျက်သည်။ ထို့ကြောင့် ပါးစပ်နှင့် အစာလမ်းကြောင်း၌ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် အစားအစာစားသုံးမှုနှင့် အာဟာရရှိမှုတို့အတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသမှုနှင့် စတမ်းဆဲလ်အစားထိုးကုသမှု (Bone Marrow and Stem cell Transplantion) တွင် အာဟာရနှင့်ပတ်သက်၍ အစားထိုး လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိသည်။ ဤကုထုံးတွင် လူနာအချို့၌ အစားအစာ စားသုံးမှုနှင့် ချေဖျက်စုပ်ယူမှုတို့၌ ယိုယွင်းမှုများ တွေ့ရသည်။
လူနာတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် အာဟာရ၏ လွှမ်းမိုးမှုကွဲပြားခြားနားကြောင်း တွေ့ရသည်။ အာဟာရသည် အကျိုးရလဒ်ကောင်းများ ဖြစ်ထွန်းစေသည်။ သို့သော် တချို့သော အစားအစာများက ဆိုးကျိုးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မီးကင် ၊ ကြော်လှော်ထားသော အစားအစာများ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်
9:11:00 AM Myanmar News Updates No comments
မီးကင်ကြော်လှော်ထားသော အစားအစာများကို အမြဲစားသုံးလျှင် ဆီးကြိတ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်ကြောင်း သိရသည် ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆီယက်တဲလ်မြို့ ရှိ ဖရက်ဟတ်ချင်ဆန် ကင်ဆာသုတေသနဌာနမှ သုတေသီများသည် ဆီးကြိတ်ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရသော အမျုိုးသား ၁၅၄၉ ဦးအား သုတေသနပြု့ လေ့လာခဲ့ရာ ယင်းကဲ့သို့ တွေ့ ရှိရခြင်းဖြစ်သည် ။
ကြက်ကြော် ၊ ငါးကြော် ၊ အာလူးကြော် စသော အလွန်အကျွံမီးကင်ကြော်လှော်စီမံထားသည့် အစားအစာများထဲ့၌ ကာစီနိုဂျင်းနစ်ဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သဖြင့် အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်မှ အသက် ၆၀ အတွင်း အမျိုးသားများ၌ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ဆီးကြိတ်ရောင်ရမ်းခြင်းမှာ ကင်ဆာ ရောဂါအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ကြောင်း သိရသည် ။
9:08:00 AM Myanmar News Updates No comments
ကမ္ဘာ့သေကြောင်းကြံမှုအများဆုံးနေရာကတော့ ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ Golden Gate တံတားဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရှိ ကြိုးတံတား Golden Gate ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးတံတား စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ ၁၉၃၇ မေလမှ စတင်ပြီး ယနေ့အထိ သေကြောင်းကြံမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၆၀၀ ကျော်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။
အရှည် ၈၉၈၁ ပေ ရှည်တဲ့ ကြိုးတံတားမှာ သေကြောင်းကြံမှုဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်စစ်တမ်းအရ သုံးလကို ၁၇ ယောက်နှုန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း သေကြောင်းကြံမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၄ ဦး ကို ဆယ်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် ပျောက်ဆုံးသူအရေအတွက်က ပိုမိုများပြားခဲ့ ပါတယ်။ ရေနဲ့ တံတားအမြင့်ဟာ ၂၄၅ ပေရှိပြီး ခုန်ကျတဲ့အခါ တစ်နာရီ ၇၅ မိုင်နှုန်းနဲ့ ကျပြီး Trauma လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက် ဒဏ်ရာကြောင့် သေ ဆုံးကြရပါတယ်။ ရေပေါ် ထိတဲ့အရှိန်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးက အရိုးများ ကျိုးပြီး အူ၊အသည်း၊ နံရိုး၊ အဆုပ် စသည်ဖြင့် အားလုံး ဆုပ်ပြတ်သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေနိုင်ချေ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အသက်မသေသူ ၃၊ ၄ ဦးသာ ရှိပြီး ဒုက္ခိတ ဘဝကိုရောက်ရပါတယ်။
ဒုတိယသေကြောင်းကြံမှုအများဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဖူဂျီတောင်အနီး တော မှာတောင် တစ်နှစ်ကို ၇၈ ဦးပဲ သေပါတယ်။ အရေအတွက် ရာဂဏန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ Golden Gate မှာတော့ ၁၆၀၀ ကျော်သွားပြီး ဒါကလည်း စာရင်းအတိအကျမဟုတ်ပါဘူး။ အတိအကျသိချင်လို့ တံတားအောက်မှာ ကင်မရာတပ် ကြည့်လိုက်တော့ ဌာနဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်ထက် အရေအတွက်များများ ခုန်ချသက်သေနေကြ တာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယင်းသို့ဖြစ်ရပ်များမှ လွတ်ကင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒေသခံအာဏာပိုင်တို့က အမျိုးမျိုးကြိုးစားပါတယ်။ အောက်ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း Suicide hotline ဖုန်းကိုထားရှိပါတယ်။
သေကြောင်းကြံလိုသူတွေအနေနဲ့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖုန်းခေါ်ဖို့ အကြံပေး ထားပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးတယ် လို့ဆိုပါတယ် ။ နောက်ထပ်ကြိုးစားမှုကတော့ စတီးခြင်ထောင် ပတ်ပတ်လည်တပ်ဖို့ဖြစ်ပါ တယ်။ကင်းလှည့်လည်မှုကိုလည်း နေ့ရောညပါ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ညဘက်ဆိုရင် တံတားပေါ် လမ်းလျှောက်ခွင့်မပြုပါဘူး။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းချီကုန်ကျမယ့်အတွက် ခြင်ထောင်ဘေးကာ တပ်ဆင်ခြင်းကို မလုပ်နိုင်ခဲ့ ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် တံတားအောက်မှာ ဘယ်ညာ ပေ ၂၀ အဝေးထိ သံမဏိစတီး ခံ ပလပ်စတစ် ကြိုးမျှင် ခြင်တောင်တပ်ဆင်ခြင်းကို ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဟာလည်း ငွေကြေး ရရှိမှုအခက်အခဲကြောင့် နှောင့်နှေးခဲ့ရပါသေးတယ်။
သို့ပေမယ့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာ လုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်တင် လိုက်ပြီးနောက် သေကြောင်းကြံမှု ယခင်ကထက် သိသိသာသာ နည်းပါးသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်သော သုတေသနနှင့် တီထွင...
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Electronic Textbook များအသုံးပြုေ...
မီးကင် ၊ ကြော်လှော်ထားသော အစားအစာများ ဆီးကြိတ်ကင်ဆ...
Zapya ထက်နှစ်ဆလောက်မြန်တဲ့ Flash Transfer လာပြီနော...
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်သည့် အ...
ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သည့် တရုတ်ဆန်များ နယ်စပ်မှတစ်ဆင့်...
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားစေရန်ကြိုးစားနေတဲ့ ဤတရာခံ...
ကမ္ဘာ့ ပုံရိပ်အား အာကာသ အတွင်းရှိ ပတ်လမ်းမှ ပထမဆုံး...
Mec Tel မှ ထုတ်သော 800 Mhz ဖုန်းများအတွက် Internet...